ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကုမ္ပဏီများသည်လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုရန်အသင့်ဖြစ်နေပြီ Martech Zone
လူထုဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများသည် Social Media ကိုအသုံးပြုရန်အသင့်ရှိနေပြီ
သောကြာနေ့, သြဂုတ်လ 21, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါ၏အနောက်ဆုံးပို့စ်နှင့်အတူ Brody PR စနစ် slammingငါထင်တာကငါကလူမှုရေးမီဒီယာကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ PR ကုမ္ပဏီတွေကိုမုန်းတယ်။ ဒါကအမှန်တရားကနေနောက်ထပ်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ငါသူတို့ပဲအတူတူပါပဲပြုမိလျှင်ဆိုရှယ်မီဒီယာအေဂျင်စီနှင့်ပတ်သက်။ ဘလော့ဂ်ပို့စ်တင်ခဲ့သည်သကဲ့သို့နည်းတူအလွယ်တကူလိမ့်မယ်။
Kyle Lacy ကတစ် ဦး ကိုယူလိုက်ပါတယ် နောက်ထပ်ခြေလှမ်းဖော်ပြ
သင်၏အများပြည်သူနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီသည်၎င်းတို့၏ ၀ ယ်ယူသူများအားအမှတ်တံဆိပ်စီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုစာရေးခြင်း၊ စကားပြောခြင်းနှင့်ပညာပေးခြင်းမပြုပါကကော။ အစက်အပြောက်မှာသူတို့ကိုပစ်ခတ်။
အားလုံးလေးစားမှုနဲ့ငါ Kyle နှင့်အတူသဘောမတူဘူး။
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်လူမှုမီဒီယာတို့အကြားစစ်ပွဲမဟုတ်ပါ၊ ပြည်သူလူထုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဇယားတွင်ပါ ၀ င်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားဆဲဖြစ်သည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကျွမ်းကျင်သူမှ (ကျွန်ုပ်အားလုံးသူတို့ကိုစိန်ခေါ်မည်မဟုတ်ပါ) ပြည်သူလူထုနှင့်ထိရောက်စွာဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းဗျူဟာများကိုလူထုနှင့်ထိထိရောက်ရောက်မည်သို့ထိထိရောက်ရောက်တည်ဆောက်နိုင်မည်ကိုနားလည်သော PR ကိုယ်စားလှယ်များထက်ဤမီဒီယာများကိုပိုမိုထိရောက်စွာအသုံးချရန်အဆင်သင့်ရှိနေသည်။
ကျွန်တော်တို့လူမှုရေးမီဒီယာတွေမေ့နေတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူနည်းစုထဲပါ။ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးသည်အလွန်အရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီများအတွက်ကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ရလဒ်ကောင်းများရရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီများအတွက်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကုမ္ပဏီများသည်ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးများ၊ နတ်ဝင်သည်များ၊ နည်းဗျူဟာများစသည်တို့ကိုတရားဝင်ပညာတတ်ကြသည်။
ငါဆိုရှယ်မီဒီယာ posse အလွန်အမင်းချဲ့ကားပြောဆိုမှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အရေးပါမှုနှစ် ဦး စလုံးလေ့ထင်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ တိုက်ရိုက်မေးလ်၊ ဒေတာဘေ့စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကျင့်သုံးသောစာနယ်ဇင်းများတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူများစွာသောစျေးကွက်သမားများသည်အာကာသထဲတွင်အလုပ်လုပ်ရခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ပျော့ပျောင်းသည့်လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲရန်စျေးနှုန်းချိုသာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အများပြည်သူနှင့်ဆက်သွယ်သောကုမ္ပဏီများအကြားစစ်ပွဲသည်လမ်းဘေးသွားရန်လိုအပ်သည်။ Kyle နှင့်ငါကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာများကသူတို့ကိုလက်ခံရန်၊ ကူညီရန်နှင့်သူတို့ထံမှသင်ယူရန်လိုအပ်သည်။ PR မီဒီယာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှအလိုအလျောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကို PR ကုမ္ပဏီများအားပညာပေးရန်မျှော်လင့်နေပါသည် နားလည်ပါတယ်သူတို့ရရှိနိုင်သည့်ရလဒ်များနှင့်ချက်ချင်းဖြည့်ဆည်းပေးမှုကိုသူတို့နှစ်သက်ကြသည်။
ဒါကပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်လူမှုမီဒီယာအပေါ်ငါ့2ဆင့်!
အားဖြင့် Kyle ၏ဓာတ်ပုံ Kyle Weller.
Tags: Kyle Lacyprပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးလူမှုမီဒီယာ
Brody PR: သင်၏ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကုမ္ပဏီအားဘယ်အချိန်တွင်ပစ်ချမည်နည်း
WordPress Permalinks ပိုကောင်းအောင်
21:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 8, 58
Kyle ၏ဓာတ်ပုံသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ဟားဟား။
ငါသဘောတူတယ်။ ငါဆိုရှယ်မီဒီယာသည်အဖိုးတန်သည်ဟုလူတိုင်းအားယုံကြည်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အချိန်များစွာဖြုန်းနေသည့် "ဆိုရှယ်မီဒီယာများ" မှပင်ငါငြီးငွေ့နေသည်။ ပြည်သူ့ယခုအားဖြင့်သိသင့်ပါတယ်။ တခါတရံမှာလူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာကိုတောင်မှငါတို့ကိုကန့်ကွက်ခြင်းမပြုမီခုခံကာကွယ်မှုခံယူဟန်ရှိသည်။ ငါယုံကြည်စိတ်ချရသောအချိန်လျော့နည်းနှင့်သူတို့၏မျက်စိကိုဖွင့်လှစ်သောသူတို့အဘို့အရလဒ်တွေကိုပေးပိုအချိန်ဖြုန်းသွားမယ့်။
21:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 24
ဦး စွာ၊ ထိုပုံကိုအသုံးပြုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းသည် pic Vault ရှိဝှက်ထားသောဘဏ္treာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာကျွန်ုပ်သည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကိုလုံးဝဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါ PR ဆက်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာအတွက်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္playsကနေဆဲကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ ငါပြောချင်တာကမင်းရဲ့ပြည်သူလူထုဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဟာအနည်းဆုံးဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးချနိုင်မယ့်အလားအလာကိုမစုံစမ်းဘူးဆိုရင်သူတို့ဖောက်သည်တွေကိုအကြွင်းမဲ့တရားမျှတမှုရှိအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ Indianapolis ရှိ Blast Media ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများစွာသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမှန်ကန်သောနည်းလမ်းများဖြင့်အသုံးပြုနေကြသည်။ ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အင်တာနက်ကိုသုံးရန်အရေးကြီးသည်၊ ထိုအချက်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ လူတွေကိုတာ ၀ န်ခံဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။
ကောင်းသော post, Doug ။ ကျွန်ုပ်၏ iPhone တွင်စာရိုက်သောစာလုံးပေါင်းအမှားများအတွက်ကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါသည်။
21:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 9, 47
PR စနစ်ရှေ့မှောက် Kyle တွင်ကောင်းသောဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုလိုအပ်ခဲ့သည်။ Brody ကိုနောက်ဆုံးပို့စ်တင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနည်းနည်းလောက်ရွေးယူချင်ခဲ့တယ်။
ဒါဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံပဲ! ငါသည်လည်းအခြားအအေးမြသူတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ ... ။ အထူးသဖြင့်သင်နှင့်အတူတ ဦး တည်းမိန်းကလေးရဲ့ခြေထောက်ပတ်ပတ်လည် ... တောက်ပ။ ငါနီးပါးအသုံးပြု! ဂူဂဲလ်ပုံရိပ်များသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်!
21:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 9, 26
ငါကအခြားသူများအကျိုးရှိစေဖို့ "သင်ခန်းစာများသင်ယူခြင်း" ဟုခေါ်သောအပြုသဘောဆောင်သောဘလော့ဂ်တစ်ခုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်။ ငါ့ကိုသင့်ရဲ့ကိုးကားထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပို့စ်ကိုလင့်ခ်လုပ်ပါ။ http://brodypr.blogspot.com/
21:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 33
Robby ။ သငျသညျအံ့သြဖို့မပျက်ကွက်ဘူး။ မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြင်းခုံသင့်တယ်လို့ငါထင်နေတုန်းပဲ။ 🙂
21:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 9, 29
အမေရိကရှိပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအသင်း (PRSA) မှ PR ကိုမည်သို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်မှာဤတွင်ပါ။
Public Relations သည်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကြီးကြပ်ရေးနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများဖြစ်သည်။ ၄ င်းသည်မစ်ရှင်များနှင့်တန်ဖိုးများကိုရရှိလိုပါကအဖွဲ့အစည်းနှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးရှိသောဆက်ဆံရေးကိုလိုအပ်သောသူများအားမဟာဗျူဟာကျသောနားထောင်ခြင်း၊
ဒီအဓိပ္ပါယ်ကရယ်စရာကောင်းတဲ့ကျယ်ပြန့်တယ်။ PR ဆိုသည်မှာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်အရေးပါသူအားလုံးနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်သွယ်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ သို့သော်သင်ဤရည်မှန်းချက်ကိုမအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ၀ န်ထမ်းတိုင်း၊ ဖောက်သည်တိုင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအကြောင်းသူတို့ဆန္ဒရှိတိုင်းပြောဆိုနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ PR ကုမ္ပဏီများသည်သတင်းမီဒီယာများကိုသတင်းမီဒီယာများအားတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဖြင့်ပြည်သူလူထု၏အမြင်အပေါ်ကြီးမားသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ လူမှုမီဒီယာပုံစံတစ်ခုချင်းစီ၏အသံများမြင့်တက်ခြင်းသည်မတားဆီးနိုင်သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် PR ကျွမ်းကျင်သူများကိုလုံလောက်စွာခန့်ထားနိုင်မည်ဟုမမျှော်လင့်နိုင်ပါ။
ဆိုလိုသည်မှာ PR သည်တန်ဖိုးမရှိဟုမဆိုလိုပါ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် PR စနစ်ကို "မဟာဗျူဟာမြောက်လုပ်ဆောင်မှု" အဖြစ်ပြည်သူလူထု၏ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုလွှမ်းမိုးသောမီဒီယာလောက၌သာတန်ဖိုးရှိသည်။ ကျနော်တို့ကဒီကမ္ဘာပေါ်မှာနေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်သေနေပြီ။ ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ရက်များ၊ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများနှင့်သတင်းစာများသည်နေရာအနှံ့တွင်ပြိုလဲလျက်ရှိသည်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ PR စနစ်ကပျက်ကွက်နေတယ်ဆိုတာသိတယ်။ Edelman 2009 Trust Barometer အရ (http://www.edelman.com/trust/), "target =" _ blank "> www.edelman.com/trust/), ၇၇% သောအမေရိကန်များသည်ကုမ္ပဏီများကိုယုံကြည်ကြသည် နည်းသော လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကထက် ကျွန်ုပ်တို့မှ ၂၆% သာကော်ပိုရိတ်သတင်းစာထုတ်ပြန်ချက်များအပေါ်အမှန်တကယ်ယုံကြည်ကြသည်ဟုလည်းသူတို့ကအစီရင်ခံသည်။ စကားမစပ် - Edelman သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံး PR ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ PR စနစ်မှလူများသည်ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှ ၁/၄ ကိုသာသူတို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်လျှင်၎င်းတို့သည်သူတို့အလုပ်အတွက်ဆိုးဆိုးရွားရွားဆိုးရွားရပေမည်။ သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုဝင် ၁/၄ သာသင့်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်စိတ်ချလျှင်သင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်နှင့်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများအကြောင်းလူများအားအမှန်တကယ်ပြောဆိုရန် ၀ န်ထမ်းများအားအားပေးနေခြင်းဖြင့်သေချာစွာစုစည်းထားသည့် PR ရှေးဟောင်းစကားစုများမှမဟုတ်ပါ။ ဒါကလှည့်ဖျားအတွက် mired တ ဦး တည်း၏အစား, တစ် ဦး အသုံးဝင်သောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်လိမ့်မယ်။
သြဂုတ် 22, 2009 မှာ 5: 17 AM
အများပြည်သူနှင့်ဆက်နွယ်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်နေသည်ဟုထင်သည်။ များစွာသောမှတ်ချက်များအငြင်းအခုန်ရည်ရွယ်ချက်ဤနေရာတွင်ဖြစ်ကြသည်။ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုရှိသင့်တာကိုသူတို့အားလုံးသဘောတူတယ်။ ငါတို့မှတ်ချက်များမှတဆင့်လည်းဒီ post မှာဒီနေရာမှာဆွေးနွေးငြင်းခုံစတင်နိုင်ပါသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါတို့အားလုံးအကြားတိုတိုတုတ်တုတ်အငြင်းအခုန်ရှိနိုင် ... ကောင်းတဲ့ကံကောင်းပါစေ ... puck .. ကံကောင်းပါစေ
သြဂုတ် 25, 2009 မှာ 6: 02 AM
ကောင်းပြီ၊ စားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအနှောင့်အယှက်ပေးနေသော (၉၀% သောအမှိုက်သရိုက်များထဲမှ) စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ဆေ့ခ်ျများအရဆိုရလျှင်ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်သူတို့၏စီးပွားရေးအတွက်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သည်မဟုတ်သည်ကိုသံသယရှိစရာသာဖြစ်သည်။ သင်၏ထုတ်ကုန်သည်လူမှုရေးမီဒီယာပေါ်ရှိလူ ဦး ရေကို ဦး တည်ချက်မထားပါကအထူးသဖြင့်သင်မသိသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပါ ၀ င်သောကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်မည်သည့်အရာမှဆွဲဆောင်ရန်မလွယ်ကူပါ။
23:2009 pm တွင်စက်တင်ဘာ 7, 43 မှာ
ပါတီပွဲအတွက်အနည်းငယ်နောက်ကျသော်လည်း Doug အလွန်ကြီးသော post (နှင့်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ထံမှတွေ့မြင်ရခြင်းကစိတ်လန်းဆန်းစေသည်) ငါသဘောတူ, ရန်တွေ့ဖယ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်; ထွက်ရှိအချို့အကြီးအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကျိုးအတွက်နည်းနည်းလေးအတွက်ရှေ့ကိုတောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ (RSW / US) ကလူမှုရေး / ဒီဂျစ်တယ်ရှုခင်းအပေါ်အေဂျင်စီများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများရဲ့ရှုထောင့်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်၊ သင်၏ရာထူးကိုကောင်းစွာဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်သည်။ အထူးသဖြင့်, တွေ့ရှိချက်များထဲမှ:
စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည့်အဓိကစျေးကွက် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်နှစ်ခုအနက် PR ကုမ္ပဏီများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုတိုင်းတာရာတွင်၎င်းတို့၏စွမ်းရည် / အတွေ့အကြုံများနှင့် ပတ်သက်၍ အဆင့်အတန်းမြင့်မားနေပုံရသည်။ PR ကုမ္ပဏီများ၏ ၆၀% ကကြော်ငြာအေဂျင်စီများ၏ ၄၉% နှင့်စျေးကွက်၏ ၄၅% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လူမှုမီဒီယာကိုတိုင်းတာသည်။
ဤအချက်အလက်နည်းနည်းမျှသာအခြေအနေနှင့်မကိုက်ညီပါ၊ သို့သော်စစ်တမ်းကိုဤနေရာတွင် download လုပ်နိုင်သည်။ http://www.rswus.com/main/indexsurvey.php သင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်နောက်သို့မျှော်လင့်။
စက်တင်ဘာ 24, 2009 မှာ 2: 51 AM
ဒါကစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုပါ။ ဒါကိုဖောက်သည်တွေနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အတော်များများကိုကျွန်တော်ဖြန့်ဝေခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။